I-iWatermark Pro Ngoku iyafumaneka kwiWindows - Ngokukhuselekileyo kwaye ukhusele iiFoto zakho | Plum emangalisayo
UMHLA: ngoJanuwari 6, 2014
iWatermark Pro yeeWindows yinguqulelo yokuqala ye-iWatermark yeeWindows. Senze le mveliso sisebenzisa umbala ohambele phambili kunye netekhnoloji yeefoto uMicrosoft enazo ngabaphuhlisi beWindows wathi uJulian Miller, uMsunguli kunye ne-CEO yePlum emangalisayo.
I-iWatermark, yi-No. 1 kwaye kuphela isixhobo sokujonga ukubonwa esikhoyo kuwo onke amaqonga ama-4 i-iPhone / i-iPad, iMac, iWindows kunye neWindows. I-iWatermark sesona sixhobo se-watermarking saziwayo esithandwayo seefoto.
Ngokukhuselekileyo, khusela kwaye ukhusele iifoto zakho ngombhalo, imizobo, isiginitsha okanye i-watermark ye-QR. Nje ukuba ifakwe kwifoto le watermark ibonakalayo iyenziwa kwaye yeyakho.
* Isebenza kunye neLightroom, Photoshop, Picasa, ACDSee, iPhoto, Aperture kunye nabanye abaququzeleli bezithombe
* Ukulungiswa kwebatch okanye ukulandelelana.
* Igalelo / Ukukhutshwa kwazo zonke iintlobo zefayile eziphambili iJPEG, TIFF, PNG, RAW, njl.
* Sebenzisa i-metadata (i-GPS, i-Exif, i-XMP) njengeewermark.
* Ngokukhawuleza ama-32/64 ama-CPU / ii-GPU ezininzi.
* Digitally sayina iifoto zakho / umsebenzi wobugcisa kunye neWatermark ukubanga, ukhusele kwaye ugcine impahla yakho yobungcali kunye nodumo
* Iifoto zinokuhamba zintsholongwane emva koko zibhabha ziye emhlabeni. I-watermark enegama, i-imeyile okanye i-url ukuze ifoto yakho ibe noqhakamshelwano olubonakalayo nolusemthethweni kuwe
* Yazisa inkampani yakho, igama kunye newebhusayithi ngokusebenzisa iikhowudi zeQR njengemilwelwe
* Kunqande ukungavisisani, ukumangalelana okunexabiso kunye nentloko ebuhlungu evela kubabhali abathi bebengazi ukuba uyidalile
* Kulumkele ukuxabana kwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda
I-iWatermark ye-App ebalulekileyo yokuKhangela iiNzululwazi zezoProfessional, iShishini kunye nokuSebenzisa ngokwakho kwiWindows, Mac, Android kunye ne-iOS. I-iWatermark Pro yeeWindows kukwenzela iiwatcharking, ubungakanani kwakhona, ukuphinda uzibize iifoto kunye neminye imizobo. Yeyona ndlela ilungileyo yokutyikitya umsebenzi wakho wobugcisa kwaye uyamkelwe njengepropathi yakho yokuqonda. Ivumela ukuthengiswa kweewatchark ezinokusetyenziswa kwiqonga lomnqamlezo kwinguqulelo yeMac.
Iplum emangalisayo yinkampani ebucala eyenzelwe i-iOS, iMac, iiWindows kunye nokusetyenziswa kwe-Android. Inkampani yasekwa ngumbonisi wesoftware uJulian Miller. Iiofisi eziphambili zePlum Amazing ziseMelika kodwa zineeofisi kwihlabathi liphela. Iplum emangalisayo ngumboneleli wehlabathi ngokusetyenziswa kweselfowuni kunye nedesktop ukusukela ngo-1995.
Ngolwazi olungakumbi nceda uvakatye:
Ikopi yokujonga kwakhona nayiphi na isoftware yethu, nceda unxibelelane nathi.